Windows ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုမည့် Software နှင့် သက်ဆိုင်သော Unicode Font ကို Home Page တွင်ရယူနိုင်ပါသည်။ 1. ဒေါင်းလုပ်ရယူထားသော ဖောင့်ဖိုင်ကို ညာကလစ်နှိပ်ပြီး ပေါ်လာသော pop up menu မှတဆင့် “Install” ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် 2. ဒေါင်းလုပ်ရယူထားသော ဖောင့်ဖိုင်ကို ၂ချက်နှိပ်၍ ပေါ်လာသော dialog မှတဆင့် “Install” ခလုတ်ကို နှိပ်လျှင် ဖောင့်သွင်းခြင်းပြီးမြောက်ပါသည်။ Apple (Mac) ကွန်ပျူတာ 1. ဒေါင်းလုပ်ရယူထားသော ဖောင့်ဖိုင်ကို ၂ချက်နှိပ်လျှင် FontBook ဝင်းဒိုးပေါ်လာပါမည်။ 2. FontBook ၏အောက်ခြေရှိ “Install Font” ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖောင့် ၂ မျိုးမြင်သော Zaw Decode ဖောင့်
Zaw Decode Font သည် မြန်မာဘာသာ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဘာသာများပါ ဖတ်ရှု့ရေးသားနိုင်သော ယူနီကုဒ် ဖောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် ဇော်ဂျီဖောင့်ဖြင့်ရေးသားထားသော စာများကိုလည်း ၈၅% လောက်မှန်ကန်အောင် ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။ ZawDecode Font Download Pyidaungsu-ZawDecode-2.1_Regular.ttf Pyidaungsu-ZawDecode-2.1_Bold.ttf အခြား‌‌သောရွေးချယ်စရာများ – Google’s Noto Sans Myanmar font style ZawDecode font NotoSansMyanmar-Regular-ZawDecode-8.ttf NotoSansMyanmar-Bold-ZawDecode-8.ttf Google’s Noto Sans Myanmar UI font style ZawDecode font NotoSansMyanmarUI-Regular-ZawDecode-8.ttf NotoSansMyanmarUI-Bold-ZawDecode-8.ttf
ယခုအခါ Pyidaungsu, Myanmar Census ဖောင့်များ နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်နိုင်ရန် Version History ကို ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည်။ (ဇယားကွက်) ပြည်ထောင်စုဖောင့် (Pyidaungsu font) ကို MCF NLP မှမူပိုင်ဖြစ်ပြီး OFL ဖောင့်လိုင်စင်ဖြင့် ဖြန့်ချိပါသည်။ စာလုံးဒီဇိုင်းကို Myanmars Net မှ CEO ဦးဇော်ထွဋ်က ဝင်းအင်းဝဖောင့် ကိုလှူဒါန်းပေးပါသောကြောင့် ဝင်းအင်းဝဖောင့်မှ စာလုံးကို ကူးယူပြီး ပြည်ထောင်စုဖောင့် အဖြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယူနီကုဒ်ဖောင့် အဖြစ် ဆက်လက်ရေးသား ပြင်ဆင်သူ ဆန်းထွန်းဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အပံ့ပြုထားသော ဘာသာများမှာ- ဗမာ, သက္ကတ/ပါဠိ, မွန်, ရှမ်း, စကောကရင်, ပိုးကရင်(အနောက်ပိုင်း), ပိုးကရင် (အရှေ့ပိုင်း), ပအိုဝ်း, ကယား, အရှိုချင်း, ပလေးပလောင်, […]